Kusukela operation efanele izinga imishini yokuthunga imikhiqizo incike evumelanisa. Perfect umshini overlock yaseZimbabwe futhi kungaba kuphela uma esakhiwe kahle ntambo nokulawula ukungezwani kwabo ohlelweni umshini wokuthunga.
Overlock is overcasting umshini, okwenza umkhiqizo onqenqemeni ezikhangayo iphinde ivimbele izindikimba ebhidlikayo. Njengoba izintambo ziyobe ziphethwe uyakwazi lokhu imishini iyoba usizo ngempela, futhi kuvumele uhlelo ekhaya lokuthunga izinga okusezingeni izingubo, akukho okubi kakhulu ukwedlula emakethe namuhla futhi ezitolo odezhy imfashini. Nokho, ukuze uthole ukusebenza, kufanele ubuyekeze ngokucophelela imithetho eyisisekelo ukuze ugweme amaphutha futhi ungapheli lokudlela up iyiphi izicubu noma isitshalo.
Imibhalo umsebenzisi ukusiza
Njengomthetho, kuleli bhukwana kunoma isiphi isambatho Liyincwadi echaza eziyisisekelo imithetho yokusebenza, ezisiza hhayi kuphela ukusebenzisa idivayisi kahle, kodwa futhi ukuba afeze izinyathelo ngenxa yokulungiswa. Kodwa kuthiwani uma lulahlekile idokhumenti, indlela yokugcwalisa trehnitochny Chinese Overlock ngaphandle imanyuwali yomsebenzisi? Lapha usizo ukuqokwa ekhonjiswe nezindlu imishini yokuthunga. Kodwa uma engekho, wena nje kudingeka ukuqonda Umgomo we operation unit, bese nobunzima sigqoka ingekho, ngisho emva isikhathi eyize enwetshiwe.
Kungani overlock amathathu ezine imicu?
Ukuze uqonde ukuthi ukugcwalisa serger IsiShayina (trehnitochny), isiqondiso lapho izimpawu walahleka kusulwe emzimbeni, kudingeka ukuba uqonde ukuthi kungani imicu emithathu kudingeka ukusebenza futhi ukuthi lihluke kanjani chetyrehnitochnogo iyunithi. Ngakho, umehluko inani izinaliti. Kwayo overlock kakhulu elula osetshenziselwa Looper yasenhla nemithombo yasenzansi futhi inaliti. Ngo imishini ezibizayo (chetyrehnitochnom) izinaliti ezimbili amiswa, Ngakho-ke, inani le ohlobo kwandisa.
Umgomo we operation umshini wokuthunga iyona nokuxhumana avumelanayo izicubu ukunikezela Regulator ngaphansi ummese, lapho le ndwangu usike futhi ngokushesha uya Looper ukucutshungulwa lokuluhlaza okuyinto iphothene nge uthunge bushelelezi kokuba inaliti ezifakiwe. Overlock trehnitochny okuhloswe kuphela overcasting, ngenkathi khona izinaliti ezimbili elingangena ngokuphepha thunga wathungela izindwangu ngaphandle umshini wokuthunga.
Kufanele kuqashelwe ukuthi imicu ukugcwaliswa kanye onobuhle ezishibhile futhi kuyabiza kucishe, ngoba usebenza aluka efanayo isimiso nge Looper inaliti. Lokhu kusho ukuthi ukuvezwa samanje kufanelekile hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa ntambo ukugcwaliswa e umshini trehnitochnuyu overcasting, kodwa futhi ngoba okuthuthukile imodeli chetyrehnitochnoy.
Indlela intambo inaliti
Ngakho, indlela yokugcwalisa serger trehnitochny Chinese? Iziyalezo kokufaka ikhoyili, eyenzelwe inhlangano enkulu engahlolwa amarobhothi yenaliti, njengoba kulandela:
ikhoyili ogibele umnikazi futhi phakamisa emaphethelweni emucwini kuya uhala emgodini tripod ekhethekile;
falling phansi overlocking, intambo ngizodabula phambi imbobo zokuthola isilawuli ukungezwani;
Okwengeziwe Slots ekhethekile sidlule ukuba isigwedlo okuphakelayo noma hook ekhethekile;
saziso endleleni eya intambo inaliti kumele kuvikelwe ngazo zonke izingwegwe ukuthi akumelwe aphanjaniswe enqubeni;
yinto yokugcina onqenqemeni ngentambo vdevayut inaliti.
Overlock 3-ngentambo - it is a idivayisi elula kakhulu ekwelapheni izigaba komkhiqizo. Ngesikhathi esifanayo, lolu phiko ezinquma zonke uhlevane, okwenza onqenqemeni ephelele, futhi ngobumnene liguqubele kuye. Kufeza indima Looper izakhi liguqubele. Ukuze awahlanganise umthungo flat futhi akuzange kubonakale lizuze noma babanjwa, kufanele siqaphelisise badedele ngentambo ku anemifantu unit.
Indlela i-elingenhla Looper ngentambo
Nakuba intambo laying suture inaliti sidlula Slots phezu komzimba, elingenhla Looper ngentambo kufihliwe ngemuva ekhethekile ikhava overlock. Lokhu kuvumela umsebenzi imishini yokuthunga futhi ungesabi ukuthi indwangu iphathwa ngeke ukudida intambo noma Dabula. Ngakho, yini izenzo amaKristu okufanele kwenziwe kuze Looper engenhla futhi indlela yokugcwalisa serger trehnitochny Chinese? Iziyalezo element phezulu overcasting ezilandelayo:
ngentambo ogibele umnikazi, kuvuswa futhi sehliselwe tripod isilawuli ukungezwani;
uhala threaded e inkatho phezu kwezindlu kanye ngokukhishwa ukuba amajaji oMkhandlu hook ngaphansi overlock isivalo;
Ngaphezu kwalokho ukulungisa intambo kuwo wonke izingwegwe phezulu futhi threaded emgodini we Looper.
Indlela I-ngentambo Looper aphansi
Ukuze ohlelweni lonke ku imikhiqizo emaphethelweni aluka wasebenza, kubalulekile ukuthi zonke imicu emithathu ezilayishiwe kahle. Kungenjalo, umugqa ngeke zisebenze. Incazelo kanjani ugcwalise trehnitochny ngentambo serger ngoba Looper ephansi, kucishe kuya phezulu. Kukhona futhi kufanele isethwe umnikazi ngentambo, sibambelele tripod, futhi somthetho voltage, Ilokhi e izingwegwe ukuze lokuluhlaza hhayi ezihlangene kanye babanjwa, ningenisa emgodini.
Badla ukuqonda Umgomo we operation, ngeke kube khona inkinga nge umbuzo indlela efanele ukugcwalisa trehnitochny serger. Kwanele aqonde ukuthi nocezu aluka efanele kubalulekile ukuthi sesigcilikisha zazinzima onezinkinga. Lokho ukungezwani kudlala indima juqu.
Indlela esikhundleni overlock ngentambo umbala?
Overlock ngentambo ukungezwani ohlelweni inendima enkulu. Uma kuwukuthi lokungakeneli inaliti, ngenkathi underside we umphetho uzobe kwakhiwa izihibe ebukekayo. Uma intambo okumelwe wenziwe phakathi nesikhathi esanele Looper ke onqenqemeni ngeke bushelelezi kahle, njengoba umphetho inobudlabha.
Sikhishwe imininingwane enjalo ngokushesha kucace ukuthi kungani esikhundleni umbala ngentambo scares Wabasaqalayo abaningi ukusebenza overlock. Nokho, kancane kulula ngendlela ongakaze uyicabange. Ngakho, indlela yokugcwalisa trehnitochny serger umbala entsha? Eduze umnikazi, usike wentambo ngokucophelela tie emaphethelweni ifilimu elisha, kulandelwa cindezela phezu isinyathelo futhi wenze yaseZimbabwe ezimbalwa kuze kube iyunithi ufinyelela adjuster ukungezwani. Kuzoba kudingeke uphakamise unyawo presser futhi Izigaxana ukuze kunqotshwe leli cebo. Khona-ke futhi, ungakwazi ukwehlisa unyawo futhi aqhubeke esebenza. Endabeni isixha e inaliti izophinda kudingeka basize pass Lihle ngemgodini wakhe.
Ukwazi indlela yokugcwalisa serger IsiShayina (trehnitochny), imfundo manual okuyinto ilahlekile, hhayi kuphela ukugwema ezivuzayo ebukekayo, kodwa futhi zokugwema ukuphuka imishini yokuthunga. Ngempela, kulesi simo, njengoba ukuthunga, ukunemba - lena isihluthulelo sempumelelo kanye nokunemba - nemfuneko kangcono izinga imikhiqizo ekhiqizwa.
Amathoyizi ka pompons ngezandla zabo. Indlela yokwenza ithoyizi ka pompons
Amabhuzu, amabhuzu hook: izithombe, incazelo, izincomo
Isixha Bridal of satin kudabuke ngezandla zabo. Indlela yokwenza i isixha yokuqala kuze kudabuke umhlane
Isikhathi sokuba lwamukeleke inheritance. Yokutakula isikhathi ukwamukela ifa, uma ivinjelwe
Iyini futhi kanjani ukunquma ukucindezeleka kweso? Umkhuba wokucindezeleka kweso.
Rainbow impophoma edolobheni - isimangaliso abavamile. Kanjani ukuze uthole Rainbow Falls: Traveller Izibuyekezo
Georgia: Inkolo Georgian
Umsila-umhlanga: isilinganiselwa (isithombe). Ungakhetha kanjani umqhubi omuhle kakhulu?
Ikhishi isitayela Chalet. Isitayela Chalet emaqaqasini ekhishini